> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan OGV in MP4 si fudud oo dhaqso
OGV waa qaab video riixo furan iyo boqortooyada-free lossy loogu talagalay by Xiph ah. Tusmaynta Foundation. Qaab lama si weyn loo isticmaali karaa. Haddii aad qabto wax badan oo files OGV oo aad rabto inaad iyaga ciyaaro qalabka qaar ka mid ah sida PSP, iPhone, iPad, iPod taabashada iyo wixii la mid ah, aad leedahay si loogu badalo OGV in MP4 for isticmaalka. Ka dib markii diinta, ayaa sidoo kale iyaga oo aad edit karaa in iMovie, FCP, ama iyaga ka ciyaaro kale codsiyada MP4 qaar ka mid ah socon.
Best OGV in Converter MP4 for Windows / Mac (El Capitan ka mid ah)
• U beddelaan qaab video ay ka mid yihiin OGV in MP4, MKV, AVI iyo xitaa 3D iyo HD video qaabab kasta.
• Beddelaan OGV si toos ah aaladaha aad la qaadi karo sida telefoonada Android iyo Apple ama qalabka ciyaarta.
• Mid ka mid ah click ay gubaan OGV in DVD ee 30X xawaaraha ugu dhaqsiyaha badan u tartameen oo kale.
• shakhsiyeeyo video by falinjeeerka, lana siii, oo intaa raaciyay Cinwaan ama saamaynta iyo ka badan.
• Ku dar metadata oo dhan aad soo bixi ama video kasta oo si iyaga ka dhig sida kuwa bixisay.
# 1 Sida loo Beddelaan OGV in MP4 la Wondershare Video Converter Ultimate
# 2 More doorasho: OGV Free in Converter MP4
# 3 Dooro OGV saxda ah si ay u MP4 video Converter
# 1 Sida loo badalo OGV in MP4
Dadka isticmaala Windows, aad u hesho ka hooseeya sida loo badalo OGV in MP4 for Windows (Windows 10 ka mid ah). Dadka isticmaala Mac, fadlan bartaan sida loo badalo OGV in MP4 for Mac (Yosemite ka mid ah) halkan .
1. OGV Load videos in OGV in ay Converter MP4
Guji "Add Files" icon inay dajiyaan aad videos OGV deegaanka si ay barnaamijkan. Ama si fudud u jiidi ah videos OGV ka your computer si app this. Marka aad ku shuban faylasha OGV, waxay u muuqataa doonaa sida thumbnails in this item app ee bidix saxaarad.
Fiiro gaar ah: Haddii u baahan, waxaad dib u qabsato karaa amarka, dib-u-magacaabi faylasha, iyaga ku eegaan adigoo gujinaya thumbnail video ah, ama wada iyaga ku darmado galay mid ka mid file.
2. Dooro MP4 ama qalabka aad rabto in aad sida qaab wax soo saarka
App Tani waxay bixisaa aad MP4 iyo qaabab filaayo in qalabka ugu badan ee ay suuqa kala format. Just xulo qaab wax soo saarka fiican sida aad u baahan tahay. Marka hore, guji qaab icon ee "Qaabka Output" Murayaad in la furo ay suuqa kala qaab wax soo saarka. Si aad u dooratid MP4, waxaad tagi kartaa qaab> "Video"> "MP4". Haddii aad rabto in ay doortaan qaar ka mid ah qalabka sida qaab wax soo saarka, ka tago si category Device in ay doortaan waxa aad rabto.
3. Habee video files (Ikhtiyaar)
Ka sokow diinta video, taas Video Converter sidoo kale kuu ogolaanaysaa inaad xaalkaa aad videos. Iyadoo qalab ay video tafatirka xoog badan, aad ku biiri karto dhowr video clips, jar, dalagga, shaandheyn videos, dhigay video dhalaalka / barbardhigo / saturation, iyo darto saamaynta video iyo subtitles. (Si fudud riix "Edit" in bar menu si ay u helaan qalab video tafatirka kala duwan).
4. Start OGV in ay diinta ka MP4
Riix ah "Beddelaan" badhanka si ay u qabtaan OGV inay diinta ka MP4. Diinta video waxay noqon doonaan in ka badan in daqiiqo. Waxaad ka arki kartaa horumarka qaab beddelidda sida ay bar cagaaran. Ka dib markii diinta, guji Folder ka furan oo ku raaxaysan files wax soo saarka. Haddii aad u baahan tahay si ay u wareejiso qalab aad u madadaalada, kaliya isku xiro qalabka si PC ka dibna iyaga ka folder wax soo saarka wareejiyo.
Video Tutorial: Sida loo badalo OGV in MP4 for Windows (Windows 10 ka mid ah)
# 2 OGV Free in Converter MP4 for Windows / Mac (Yosemite ka mid ah)
• A OGV free dhamaystiran MP4 video Converter in aynu aad si fudud loogu badalo wax caadi ah videos.
• videos Edit la function aasaasiga video tafatirka.
• Kuu ogolaanayaa in aad kala soo bixi YouTube videos aan la dhaafi karin.
• fudud loo isticmaali interface si ay u sameeyaan wax badan ka sahlan.
Fiiro gaar ah: geeddi-socodka ah ee diinta OGV in MP4 waa badan la mid ah la Video Converter Ultimate. Wixii macluumaad dheeraad ah, riix halkan .
koobnayn caadi videos waxaa ka mid ah caadi videos, iyo HD & 3D videos
Beddelaan inay Device (Presets)
ka videos goobo badan oo ay ka mid yihiin YouTube
30X Speed ​​Conversion Fast
Xadidan ilaa 10 jeer Xaddidaadda No
Sida Converter oo dhan-in-mid video ah, Video Converter Ultimate leeyahay faa'iidooyinka badan Video Converter Free. Haddii aad raadinayso ah qalab diinta video sare oo awood leh, isku day kaliya Video Converter Ultimate hoos ku qoran.